Fihazakazahana eo anoloana
(Mifototra amin'ny 1 Kor. 9:24-27)
"Koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hihazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an'i Jesôsy, Tompon'ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy."- Heb. 12:1,2
Asehon'ny Epistily ho an'ny Hebreo ny fetra tokana izay tokony hampiavaka ny fihazakazahan'ny Kristiana izay manam-paniriana hahazo ny fiainana mandrakizay. (...) Ny fitsiriritana, ny haratsiam-panahy, ny eritreri-dratsy, ny fifosana, ny fieremana dia samy enta-mavesatra avokoa, izay tokony harian'ny Kristiana eo amin'ny fihazakazahany, mba hahazoany ny fiainana mandrakizay. Ny fahazarana sy ny fihetsika rehetra mitarika ho amin'ny fahotana dia samy manala voninahitra an'i Kristy, ka tokony hafoy, na toy inona na toy inona haben'ny fandavan-tena tsy maintsy iaretana. (...) "Tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka? (...)" Na mafy toy inona aza ny tolona, dia iray ihany no nahazo ny loka. (...)
Tsy mba toy izany ny amin'ny ady atrehin'ny Kristiana. Tsy hisy diso fanantenana, ka tsy hahazo loka, izay rehetra maharitra mihazakazaka. Tsy mba fifaninanana hafainganana na fifampitahan-kery ny hazakazaka kristiana. Na ny olona masina malemy indrindra, na ny matanjaka indrindra eo amin'ny ara-nofo dia samy afaka handrombaka ny satroboninahitra mandrakizay. (...)
Mba tsy hihazakazahana foana ao amin'ny fifaninana kristiana, dia nanao fanazaran-tena henjana tokoa ny apostoly Paoly. Ny teniny hoe "Andevoziko ny tenako", dia midika ara-bakiteny hoe: Toheriko amin'ny fifehezan-tena henjana ny faniriako rehetra, ny fironan'ny saiko rehetra, sy ny filako rehetra. (...)
Io fenitra tokana io izay niezahan' i Paoly hotratrarina mba hahazoany ny fiainana mandrakizay, no niriny koa mba ho fenitra hotratrarin'ny Korintiana. Fantany fa mba hahazoany manahaka an'i Kristy dia tsy maintsy hanao tolona tsy hisy fiketrahana mihitsy izy. Noho izany no namporisihany azy ireo mba hiady mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra isan'andro isan'andro, ka hikatsaka ny toetra araka an'Andriamanitra sy ny fahatanterahana ara-panahy. Niangavy azy ireny hiala tamin'ny enta-mavesatra izy, ka hihazakazaka hanatratra ny fahatanterahana ao amin'i Kristy. - VM, tt. 274-276
Nefa kosa, mba hahazoana ny fandresena, dia tsy misy tokony hamaivanina ny zavatra ara-nofo mety hisakana ny fahazoana izany. Ny asa rehetra dia samy misy lanjany avokoa hampitongilana ny lela-mizana, ka ho antony hahazoana na tsy hahazoana ny fandresena farany. Arakaraka ny firehetam-po sy ny ezaka natao hitolomana ny haben'ny valim-pitia homena ny mpandresy. - VM, t. 274.